Lapho izinkinga zokuphila kwansuku zonke ziya ngokuya ngaphansi kwengcindezi, umsebenzi zanqwabelana, kanye cwaningo kubuhlungu, isixazululo esingcono kakhulu - ukuphumula okuhle, ukusungulwa ukhululekile efudumele. Nokho, ukuthola ukuthi akulula kanjalo. Wonke umuntu ufuna indawo ezokwenza ukulingana kahle incazelo ekahle yokudlela zabo. Futhi abantu abaningi bafuna cuisine esiphundu, nasezingeni eliphezulu of service futhi isimo esinokuthula sakuleli kwahambisana isithombe esihle iwindi. Ngakho Kunconywa kubathandi nokuzwa emangalisayo kokufunda isihloko esasikhuluma ezinye zezinhlanzi Petersburg zokudla.
Izivakashi ebuka indawo ngayinye into ekhethekile, into ezizolihlukanisela abangelwa yisisindo kwabanye ngibenze iholide esiyingqayizivele. Yingakho zokudlela zinhlobo Petersburg athandwa kakhulu. Phakathi kwabo inani elikhulu zezitsha aphume endaweni ethiwa Terrassa - yisiphephelo emangalisayo kubathandi izinga ukuphumula futhi esimweni esikhululekile. Lena indawo okokuqala wavula izivakashi ngo-2007, futhi phakathi naleso sikhathi futhi ohlangothini umsebenzi wakhe akazange ahlale ngaphandle ukuthuthukiswa. Njalo self-ngcono, ukulungiswa amaphutha kanye zamehlo - konke lokhu kwenza kube nokwenzeka ukukhuluma manje mayelana Terrassa yokudlela njengoba omunye best edolobheni. Yezefundo ngokwayo ubanzi kakhulu futhi kulula. Yinto yokuziqhenya kule ndawo - ithala ehlobo, lapho isizini efudumele ikuvumela ukuba ujabulele ukudla endaweni evulekile, futhi ebusika - nesikhathi esimnandi esikhungweni sokushwibeka. Windows Terrassa yokudlela Kushalazela iKazan Cathedral futhi saseNevsky Prospect. Ngaphezu kwalokho, yokudlela idume izitsha kakhulu American, European, isiShayina, isiRashiya, isiFulentshi, Thai futhi Cuisine Italian.
Nokho, lapho izivakashi sinifisela Kwenziwa ngawo lowo mzuzwana. izikhungo eziningi zizama ukulungisa umsebenzi wabo ukuze izivakashi ongakhuluma naye ngazo konke okuhle. A semali okubuyayo ayivumeli indiva yokudlela "Span", okuyinto vele uye wakwazi ukuhola izilinganiso siqu izivakashi eziningi. Kuyaphawuleka ukuthi umgwaqo kulesi sikhungo akulona esheshayo. Indawo yokudlela "Span" akuyona enkabeni yedolobha, kodwa kungavimbela nesikhathi esimnandi? Ikakhulukazi, leli lungiselelo kwenza kube nokwenzeka ukuba akhohlwe nesikhathi befuna futhi njalo egcwele impilo edolobheni elikhulu, futhi bajabulele ukuthula nokuthula. Ukuba umuntu amane nje ukubheka ubuhle lezo ukuvula kusukela leli phuzu ngokuthi konke okunye iba lutho. Nakuba endaweni lalesi sikebhe club yokudlela "Span", ungacabanga umusa engokwemvelo emfuleni Malaya Nevka lokho ncamashi kwenza iholide ocebile futhi ongasoze. Lokhu izimbangela lento zihlanganisa zezemfundo Ukubukwa Kuhle Petersburg zokudla futhi bakubize ngokuthi liyindawo efanelekayo ngempela. Futhi uma wengeze akaphakeme Cuisine Italian, abantu baseYurophu abathuthela kule isiRashiya, kuyoba nzima ukuba overestimate wonke jikelele koHlelo yokudlela "Span".
I ezichumayo Petersburg zokudlela zihlanganisa "Sky" - isikhungo ogama lakhe ukhuluma kakade ngobuhle ekuseni amawindi yayo. Iqembu wasebenza phezu design kule ndawo, waya nesibindi esikhulu, kodwa indlela engcono kakhulu. Banquma ukususa odongeni futhi wenze indawo tridtsatimetrovoy ingilazi panel. Ayikho-panoramic amafasitela, ozimele kanye imidwebo - konke lokhu indawo kahle by umbono omangalisayo endaweni Haymarket ka Dome of Cathedral St zika-Isaka, zonke isikhungo somlando Petersburg. Ohlezi phezu emasofeni ongaphakeme nge inkomishi yetiye ezinhle, ngokunambitha izitsha best cuisine Russian, Japanese futhi European futhi ubuka elinye lamadolobha best eRussia, kubonakala sengathi zonke izinkinga nobunzima we ebusweni eziphukile zomhlaba, lapho sawela embundwini yokudlela "Izulu."
Yini kungaba cooler kakhulu Cuisine Italian futhi umbono ongenakulibaleka kusukela amafasitela? Mhlawumbe lutho. Futhi uma esengeziwe injabulo akudingeki ukuvakashela omunye zokudlela best-panoramic Petersburg "Luce". Igama le ndawo ihumusha ngokuthi "elangeni", futhi lokhu akukho ngozi. Ngenxa namafasitela amakhulu, ukukhanyisa yemvelo yenza indawo ivumelane ngaphezulu, emkhathini futhi ethokomele. cod Ngokucophelela, kuphekwe nganobe ngutiphi tindlela, carpaccio ka Yenkomo noma pizza ephethe isilinganiso esiphelele inhlama ukugcwaliswa - konke lokhu ngisho umsindo okumnandi. Kodwa kubalulekile ukuba ziveze ithuba ukuyizama, ebuka Dome koMsindisi eBlood ezichithekile nezinye izingxenye zalesi Sinentshisekelo nabathandekayo, inkolelo yokuthi udinga ukuvakashela yokudlela "Luce" liye landa kakhulu.
Uhlu lwe-panorama Petersburg zokudlela ukuqhubeka isikhathi eside kakhulu. Kungaba umphelelisi endaweni ebizwa ngokuthi "Bellevue Brasserie" ngenhloso Winter Palace, iSonto uMsindisi Yegazi ezichithekile, uPetru noPawulu omangalisayo French cuisine. Akukho okungaba sibi kanye "Gastronomica" - kohlobo yokudlela ezinhle Petersburg ukumambula ubuhle emigwaqweni Marat futhi saseNevsky Prospekt. Mhlawumbe ngizothola uthanda "Umculi", okuyinto kungaba iqhwa at emehlweni iKazan Cathedral. Zonke lezi zindawo zihluke kakhulu, kodwa ukwabelana into eyodwa - ikhono ujabulele ukudla kwabo futhi sicabange ohlangothini engcono Petersburg.
Zingaki "McDonald" eMoscow - abathandi abaningi kangaka ukudla okusheshayo!